Vahoaka maro voatery nandao tanin-drazana hitady ravinahitra ka nivaro-pananana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Niteraka resabe tato ho ato ny fifindra-monina ataon’ny Malagasy avy any Atsimo. Mandositra ny mosary ka mitodi-doha mianavaratra. Tanjona ny hitady fivelomana. Nandalo teto amin’ny renivohitry ny Faritra Matsiatra ambony izy ireo. Natory tao amin’ny toby fiantsonan’ny fiara mpitatitra ny andian’olona maro. Nanaitra ny mason’ny mponina teto antampon-tanànan’i Fianarantsoa ity tranga ity. Nandray ny andraikiny ny mpitondra teto an-toerana, notarihin’ny Governora, Razafindrafito Lova Narivelo. Efa nandalo teto koa ny solontenan’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny Minisitra miahy ny mponina, Michelle Bavy Angelica. Natoby teny amin’ny Centre de Renforcement Educatif Scolaire (CeReS), Ambalakely izy ireo. Toerana 12 km avaratr’i Fianarantsoa, manaraka iny lalam-pirenena faha 7 iny. Ho any Ambositra, Antananarivo, Tsiroanomandidy Moramanga, Ambatondrazaka, Mahajanga, Antsiranana ny maro amin’izy ireo.
Araka ny voalazan’ny talem-paritry ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy eto Matsiatra Ambony, Ranja Herivololona Philippe, dia mandalo fotsiny izy ireo no mitoby eto amin’ity toerana ity. Noraisina izao fepetra izao ho fanohanana azy ireo ara-tsakafo. Nojerena manokana koa ny lafiny fahasalamana, indrindra ho an’ny zokiolona , ny vehivavy bevohoka ary ny zaza, izay mora andairan’ny hanoanana noho ny tsy fahampian-tsakafo. Araka ny fanisana voaray avy tamin’ny tompon’andraikitra ny 18 janoary 2021, dia 1038 ny olona efa nandalo tao. Zaza madinika ny 406 amin’ireo. Mahatratra 248 vehivavy, raha 384 kosa ny vatan-dehilahy. Ankoatra ny avy amin’ny Fanjakana, maro ny tsara sitra-po nanolotra izay foiny ho famonjena ny Malagasy iray rà aminy avy any Atsimo ireto. Tao ny nampiantrano, nanome sakafo, vola. Misy koa ny nandray an-tanana tamin’ny fandrahoan-tsakafo. Niantoka ny fandaminana ny mpitandro filaminana. Tsy nanao ambanin-javatra ny fizaham-pahasalamana kosa ny sampan-draharahan’ny Fahasalamana eto Fianarantsoa
Aombe 9 000 000 ariary ny vidiny, namidy mora 200 000 ariary monja
“Tsy hifindra monina izahay fa handeha hitady karama”, hoy ny tovolahy anankiray. Zatra mody isan-taona tokoa ny ankamaroan’ny Antandroy mandeha mila ravinahitra. Fanaon’ny maro amin’izy ireo ny mamonjy ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao any an-tanin-drazana. Nirongatra loatra anefa ny mosary tamin’ity taona ity ka tsy vitsy no niondrana niaraka amin’ny havany handeha hitodi-doha any amin’ny tany fitadiavana. Nisy nivaro-pananana mihitsy mba hahazoana vola hatao vatsy sy saran-dalana. Ny omby raha tokony ho 9 000 000 ariary ny vidiny, namidy mora 200 000 ariary monja. Tsy ny any Atsimo ihany no ianjadian’ny kere. Manafika mianavaratra tsikelikely ankehitriny ny kere noho ny tsy fahampian’ny rotsak’orana. Manana andraikitra lehibe amin’izany ny mpitondra Fanjakana. Tsy afa-maina koa ny olom-pirenena. Entanina ny isam-batan’olona hahatsapa tena ka hikoja hatrany ny tontolo iainana sy ny tranobe iombonana.